११ वर्षमा माओवादीकै ९५ मन्त्रीः सबैभन्दा धेरै रोल्पा र रुकुमबाट, कुन सरकारमा कति मन्त्री ?
०६२/६३ को जनआन्दोलनयता माओवादी केन्द्रका मात्रै ९५ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । ०४६ सालयता सरकारमा ‘हालिमुहाली’ गरेका कांग्रेस-एमालेभन्दा ११ वर्षको अवधिमा बढी मन्त्री उत्पादन गर्ने पार्टी माओवादी बनेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पहिलोपटक सरकारमा सहभागी भएको हो । त्यसयताको ११ वर्षमा ११ वटै सरकार बनेको छ भने ८ वटामा माओवादी सहभागी छ ।
अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-०६६ मा बनेको माधवकुमार नेपालको सरकार, ०६९ मा बनेको खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार र ०७० मा दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाहेक सबैमा माओवादी सहभागी छ । यसबीचमा तीनपटक माओवादी आफँैले सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुईपटक र डा. बाबुराम भट्टराईले एकपटक सरकारको नेतृत्व नै गरेका थिए ।
त्यसो त राज्यको महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा सभामुखलगायतमा पनि ०७२ यता रोल्पाली माओवादी नेताले नै जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छन् । अबको पाँच वर्ष उनीहरूले नै त्यो अवसर पाउँदै छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पाँचौंपटक अहिले मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पुगेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वनमन्त्री शक्ति बस्नेत तेस्रोपटक र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव दोहोर्‍याएर सरकारमा पुगेका छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानीमन्त्री बीना मगर र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएका हुन् ।